Microsoft Edge yeLinux yatobvumidza kuwiriranisa pakati pemabhurawuza | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Noticias, Linux software
Microsoft Edge yeLinux inogona kupedzisira yaita yangu default browser. Ndichiri pasi pekuvandudzwa, zvinogona kunge kuri kusunungurwa kwakagadzikana. Ichokwadi kuti haisati iine maficha ehama dzayo yeWindows uye Mac, asi yatove neyakaisa yakakosha kwandiri. Kubvumirana pakati pemabhurawuza uchishandisa Microsoft account
1 Microsoft Edge yeLinux Ndiani anoda imwe browser?
2 Chii chitsva muMicrosoft Edge
3 Zvimwewo zvinhu
Microsoft Edge yeLinux Ndiani anoda imwe browser?
NeMozilla Foundation iri kuwedzera kutarisa nezvematongerwo enyika pane kugadzira zvigadzirwa zvakanaka zve software, uye Google kurambidza Chromium maficha, Vaya vashandisi vanoda chimwe chinhu kubva kubhurawuza pane kusecha vashandisi veInternet vanofanirwa kutsvaga dzimwe sarudzo; Inonyatso kufira kuBrave, Edge, Opera, uye Vivaldi.
Ini handikwanise kutaura paOpera neVivaldi nekuti ini handina kuvashandisa zvakadzama. Ushingi hwakakura, asi ini handisati ndawana iyo yekuyambuka-bhurawuza sync system kuti ishande, iyo inosanganisira kuongorora QR kodhi kana kuteedzera akateedzana emazwi akakosha.
Tichifunga kuti Microsoft iri kutevera nzira imwechete yeGoogle neEdge, rega iyo bhurawuza ive iyo gedhi kune avo ekushandisa makore, uye ini ndoda Microsoft yekushandisa gore. Zviri zvemuzvarirwo kuti iwe uteedzere shanduko yeiyo purojekiti uine kufarira.
Chii chitsva muMicrosoft Edge
Microsoft inoburitsa vhezheni yeEdge vhiki rega rega pane yayo chiteshi yeDev inotarisana nevagadziri. Shanduro yega yega inounza maficha, zvigadziriso uye, wadii kuzvitaura, mamwe matambudziko matsva anotora nzvimbo yezvakagadziriswa. Iyi vhezheni nyowani, inotakura iyo nhamba 91.0.831.0, inotifadza isu se linuxers nekuti inosanganisa rutsigiro rwekupinda muakaundi yeMicrosoft muLinux, kufambisa kuwiriranisa uye kushandiswa kwemavara akapfava madingindira.
Ini ndinofanira kujekesa kuti nekumisikidza, iyo login ne Microsoft account yakaremara nekutadza. Kuti umise iyo unofanirwa kunyora mupendero: // Mureza muhwindo rebrowser. Mumhando yekutsvaga hwindo MSA Saina, uye inogonesa basa racho.
Iwe unogona kuwana iwo meseji iyo sync haina kuwanikwa yeLinux. Regedza yambiro, vhara bhurawuza uye uvhure zvakare. Zvino, ita zvinotevera:
Sarudza iyo yemufananidzo mufananidzo pane browser taskbar.
Sarudza Login muprofita dialog.
Pinda nekupinda yako Microsoft account nhoroondo.
Sarudza Kubvumirana paunobvunzwa kana iwe uchida kuyananisa account yako. Izvi zvinopindirana nemabhukumaki ako, mapassword, uye imwe data rekubhurawuza pane ese mafaera aunoshandisa neakaunzi
Panguva ino inoshanda chete neakaundi maakaundi eMicrosoft. Nekudaro, maAzure Active Directory maakaundi haasati atsigirwa.
Iyo imwe nyowani nyowani yekuwedzera inowanikwa kune ese mapuratifomu, Edge Dev ichawedzera sarudzo ye14 yakapfava midhi tema, iyo iwe yaunogona kuwana mune inoonekwa chikamu chikamu cheEdge masetingi.. Kusiyana nemadhodhi akazara, izvi zvinongowedzera chete kubata kwemavara kukero nematebhu mabhawa, zvichisiya iyo nyowani tebhu peji isina kugadzikana. Ivo zvakare vanobatana mukati nesarudzo yako yakasviba yerima kana yakajeka, uye iwo marongero maviri haatapurirane.
Misoro yemavara inoponeswa neprofita yemushandisi, uye madingindira akazara achiri kutsigirwa. Pamusoro pezvo, Microsoft yakaburitsa mamwe madingindira ane chekuita neXbox paEdge Wedzera-Chitoro pakutanga kwegore rino.
Sarudzo nyowani mune yekurudyi-tinya menyu inokutendera iwe kuvhura iyo yazvino peji mune inonyudza muverengi. Sarudzo yacho inongowanikwa chete pamapeji akatsigirwa.
Kubvira kwekushandisa iyo theme theme paLinux.
Nzira yakachengeteka yekuvhura PDF.
A nyowani manejimendi manejimendi akaunzwa kutonga kuti kana zvirimo zvematebhu nyowani zvinogoneswa, kunyanya izvo Microsoft News zvemukati.
Kana iwe uchida kuyedza Microsoft Edge, uchifunga kuti iri chirongwa muchikamu chekusimudzira, unogona kudhawunirodha vhezheni muDEB uye RPM fomati pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Edge yeLinux yatobvumidza kuwiriranisa pakati pemabhurawuza